Home Wararka Beesha Caalamka oo dhexdhexaad ka noqotay khilaafka Farmaajo iyo Rooble
Beesha Caalamka oo dhexdhexaad ka noqotay khilaafka Farmaajo iyo Rooble
Qoraal ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay in ay ka walaacsan yihiin in muranka ku xeeran maqnaanshaha Marwo Ikran Tahliil Faarax uu abuurayo xiisado siyaasadeed oo saameyn ku yeelan kara habsami u socodka Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo carqaladeynta hannaanka doorashada.
Beesha caalamka ayaan marnaba soo hadal qaadin magaca Fahad Yasin iyo ceyrintiisa. Waxa kale oo ay ka gaabsadeen in ay taageeraan go’aanka uu qaatay RW Rooble ee uu uga taqulisay Fajad Yasin.
“Waxaan ku boorineynaa hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay dejiyaan iska horimaadka siyaasadeed ee ku xeeran baaritaankan, gaar ahaanna ay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara rabshado. Waxaan ugu baaqeynaa hoggaamiyeyaasha Soomaaliya inay ka wada shaqeeyaan hormarinta dhaqangelinta Heshiiskii 27 -kii May ee ku aaddan qabsoomidda doorashooyinka, iyagoo garwaaqsan horumarka ilaa iyo hadda ay gaareen Golaha Wadatashiga Qaranka oo uu hoggaamiyo wax -ku -oolnimada Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble” ayaa lagu yiri qoraalkaas.
Waxaa intaas lagu daray “Waxaan sii wadnaa inaan ka qaybgalno hoggaamiyeyaal badan oo Soomaaliyeed si aan ugu boorinno in si deg -deg ah loo xalliyo khilaafkan, oo ay ku jirto baaritaan lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan lumitaanka Ikran iyo dhammaystirka geeddi -socodka doorashada iyada oo aan dib -u -dhac kale dhicin”